Fanafihana mitam-piadiana eto an-dRenivohitra: voasambotry ny polisin’ny BC ilay mpamatsy basy ireo jiolahy | NewsMada
Fanafihana mitam-piadiana eto an-dRenivohitra: voasambotry ny polisin’ny BC ilay mpamatsy basy ireo jiolahy
Voasambotry ny polisin’ny Brigade criminelle (BC 4), tao amina trano fandihizana iray, etsy Antanimena, ny alahady teo, ny lehilahy iray voalaza fa hoe mpamatsy sy mpivarotra fitaovam-piadiana (basy sy bala) mahery vaika ireo jiolahy mpanao fanafihana mitam-piadiana eto an-dRenivohitra.
Vela-pandriky ny polisy ny nahafahana nisambotra ny lehilahy voalaza fa mpamatsy sy mpivarotra fitaovam-piadina ireo jiolahy mpanao fanafihana eto an-dRenivohitra. Nambaran’ny loharanom-baovao fa amidiny 3 600 000 Ar ireo basy lava ary 1 000 000 Ar kosa ireo basy poleta. Hita nandritra ny fisamborana azy teny Antanimena, ny alahady teo tokony ny tamin’ny 8 ora alina, ny fitoeram-basy teny am-balahany, saingy tsy nisy basy intsony izany. Taorian’izay, nosavaina ny tranony eny Ampasika ka hita niaraka tamina fanamiana miaramila sy zandary ny bala miisa 22 amin’ireo karazany 9 mm. Voalaza fa isan’ireo nandray anjara mivantana tamin’ny fanafihana mitam-piadiana nitranga tetsy Antsahamanitra, ny volana aogositra lasa eto, ihany koa ny lehilahy izao voasambotra izao, raha ny loharanom-baovao. Nambaran’ity farany fa nilaza ho mpividy basy ny polisy tamin’izany ka nanome fotoana ny lehilahy. Mailo anefa izy ka tsy tonga tamin’ny fotoana nifanomezana. Rehefa nidina teny amin’ny trano fonenany indray ny polisy, tsy nahatratra azy intsony fa efa nifindra trano izy. Hatolotra ny fampanoavana, anio, ny tenany.
Fanafihana mahery vaika
Raha tsiahivina, ny 23 aogositra teo, nikasa handroba ilay fiara nitondra vola teny Antsahamanitra ny andian-jiolahy miisa 12 nampiasa moto Cross sy Scooter ary Bouldor. Fantatra fa nisy vehivavy efatra mpiray tambajotra tamin’izany, mitazona fitaovam-piadiana, ka nanolotra ny basy ireo lehilahy ambiny rehefa hanatanteraka ny asa ratsiny izy ireo. Nirefodrefotra ny basy, lavo teny an-toerana ny iray amin’ireo jiolahy raha teny amin’ny lalambin’Ampefiloha kosa no lavo ny iray hafa. Naratra nandritra ny fifandonana ny roa lahy ary tafaporitsaka nandritra ny fitsoahana ny jiolahy roa. Tratra nandritra ny fikarohana sy ny vela-pandrika rehetra ity mpivaro-basy ity ary mbola mitohy ihany koa ny fikarohana ny toerana nametrahan’io lehilahy io ireo basy amidiny.